ALinks - पृष्ठ २ - यात्रा र सबैका लागि विदेशमा बस्ने
ALinks, विदेश लिंक, यात्रा र सबैको लागि विदेशमा बस्ने
नि: शुल्क जानकारी र विदेश यात्रा र बस्ने मा गाइड। यात्रा गर्नुहोस्, रमाईलो गर्नुहोस्, भ्रमण गर्नुहोस् वा आसपास पसल। सार्नुहोस्, तपाईंलाई आवश्यक पर्ने चीजहरू खरीद गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, काम गर्नुहोस्, स्कूल जानुहोस् वा स्वास्थ्य सेवा पाउनुहोस्। यी स्वतन्त्र लेखहरु सबै राष्ट्रहरुका सबैका लागि हुन्। हामी संसारभरि तीस भन्दा बढी देशहरूमा धेरै भाषाहरूमा कुरा गर्दछौं। शरणार्थी स्वागत छ!
8 सक्छ, 2019 करुणा चन्दना पाकिस्तान, अध्ययन
पाकिस्तानको उच्च शिक्षा देशको स्वतन्त्रता पछि १ 1947 country 174 मा विस्तार भयो। उच्च शिक्षा आयोग (एचईसी) शिक्षा प्रणालीको हेरचाह गर्दछ। एचईसीले कोष, अनुसन्धान आउटपुट, र शिक्षण गुणको निरीक्षण गर्दछ। आयोगले देशका १ XNUMX विश्वविद्यालयहरूलाई मान्यता दिन्छ। राष्ट्रिय भाषा
इटाली: अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि कसरी आवेदन दिने?
अप्रिल 29, 2019 शुभम शर्मा इटाली, शरणार्थीहरू
यदि तपाईं इटालीमा शरण वा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा लिन चाहानुहुन्छ भने, यो लेख तपाईका लागि उपयोगी छ। हामीले आवश्यक चरणहरू र शरणका लागि कहाँ आवेदन गर्ने भनेर वर्णन गरेका छौं। साथै, अन्तमा, हामीले केहि उपयोगी लिंकहरू दिएका छौं। कहाँ
भारतमा स्वास्थ्य सेवा सुविधा
अप्रिल 17, 2019 मैत्री झा स्वास्थ्य, भारत
भारतमा स्वास्थ्य सेवाका धेरै सुविधाहरू छन्। समय अवधिमा, यो एक वैश्विक चिकित्सा केन्द्र भएको छ। साथै, एक बिरामीले सस्तो दरमा विश्व-स्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच गर्न सक्दछ। वास्तवमा, वरपर सबै अस्पतालहरू
भारत भिसाका लागि कसरी आवेदन दिने
अप्रिल 17, 2019 करुणा चन्दना भारत, भिसा
भारत भ्रमण गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईंले भारत भिसाका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। भिसा एक आधारभूत आवश्यकता को रूपमा हो यदि तपाईं अर्को देश भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ। कुनै किसिमले, सौभाग्यवस, सरकारले पनि पहल गरिरहेको छ। यसलाई बनाउनको लागि
बैंकिंग सबैको लागि हो, मेक्सिकोमा आफ्नो पैसाको साथ अधिक गर्नुहोस्
अप्रिल 12, 2019 करुणा चन्दना मेक्सिको, पैसा
हालसालै मेक्सिकोमा बसाईएको !!, यो अध्ययनका लागि होस् वा व्यावासायको लागि, त्यसो भए तपाई आफैले आफूलाई एउटा बैंक खाताको आवश्यकता भएको पाउनुभयो। यदि त्यसो हो भने, त्यसोभए तपाईले बैंकि about्गको बारेमा सबै कुरा थाहा पाउनुहुनेछ हामीले मेक्सिको वरपर शपिंग गरेर राख्यौं
जर्मनी मा सर्वश्रेष्ठ होटल
अप्रिल 1, 2019 मैत्री झा जर्मनी, होटल
यस लेखमा, तपाइँ जर्मनी मा सबै भन्दा राम्रो होटेल को सूची प्राप्त गर्नुहुनेछ। जर्मनी हरेक वर्ष लाखौं आगन्तुकहरु लाई आकर्षित गर्दछ। विश्व पर्यटन संगठनले यसलाई २०१ 2018 मा संसारको सातौं सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको देशको रूपमा स्थान दियो। जर्मनी
जर्मनीमा मल्लहरू तपाईंले भ्रमण गर्नुपर्नेछ
मार्च 27, 2019 मैत्री झा जर्मनी
जर्मनी युरोपको मुटु युरोप मा सातौं ठूलो देश हो। बर्लिन देशको राजधानी हो र यो देशको जनसंख्या million करोड .० लाख छ। जर्मनी आफ्नो Oktoberfest, कार ब्रान्ड, फुटबल, र धेरैको लागि प्रसिद्ध छ
युरोपमा स्वागत छ, सबैका लागि मार्गनिर्देशन
अगस्ट 15, 2018 Demi युरोप, उपयोगी लिंकहरू
W2eu.info - युरोपमा स्वागत छ शरणार्थीहरू र युरोपमा आप्रवासीहरूको लागि स्वतन्त्र जानकारी http://www.w2eu.info/ (अंग्रेजी) http://www.w2eu.info/map.ar.html (अरबी) http: / /www.w2eu.info/map.fa.html (फारसी) http://www.w2eu.info/map.fr.html (फ्रान्सेली) निर्वासन कार्यक्रममा अधिकार प्रो बोनो कानूनी सहायता प्रदायक संगठन, वकील, र अन्यको सूची जो सक्षम छन्
दुबई भ्रमण गर्न उत्तम समय - तपाइँ आफ्नो यात्रा योजना बनाउनु अघि जान्नुहोस्!
जुन 11, 0019 करुणा चन्दना यूएई
दुबई भ्रमण गर्न उत्तम समय दुबई लक्जरी किनमेल, वास्तुकला, र एक जीवन्त रात्रि जीवन दृश्यको लागि एक शहर हो। क्षितिज बुर्ज खलीफाले ढाकेको छ। यो एक .830० मिटर टावर छ। झरनाहरू यसको खुट्टामा छन्, जेटहरू र बत्तीहरू सहितको संगीतको साथ। एट्लान्टिस, पाम,
«अघिल्लो पोष्टहरू 1 ... 92 93 94